नेशनल ग्यालरी को आर्ट (जकार्ता), नेशनल गैलरी इन्डोनेशिया वा गैलरी Nasional इंडोनेशिया - जावा
ठेगाना: जालान मेडन मार्का टिमुर संख्या 14, गम्बिर, जकार्ता पसत, दाराह खुसस इबूकाटा जकार्ता 10110, इन्डोनेशिया
फोन: +62 21 34833954
खुल्ला समय: मंगल-सूर्य 09: 00-16: 00
आधारको मिति: 8 मई, 1 999।
इंडोनेशिया को राजधानी मा , जकार्ता राष्ट्रीय गैलरी को आर्ट (इंडोनेशिया को नेशनल गैलरी या गैलरी Nasional इंडोनेशिया) हो। यो एक कला संग्रहालय र कला केन्द्र हो। यात्रीहरू यहाँ स्थानीय संस्कृति संग परिचित गर्न र सुन्दर संग सामेल हुन यहाँ आउछन्।
नेशनल ग्यालेरीको रूपमा यो संस्था 8 मई 1 999 देखि नै अवस्थित छ। जनसंख्याको राष्ट्रिय र सांस्कृतिक विकासमा कार्यक्रम अनुसार यो स्थापित, जुन 1960 मा सुरु भएको थियो। भवनको तयारी र पुनर्स्थापना संस्कृति र शिक्षा मंत्री फूद हसनले गरेको थियो।
त्यसअघि, भवनले भारतीय निवासमा राख्यो, जुन औपनिवेशिक शैलीमा निर्माण गरिएको थियो। भवन को निर्माण को लागी सामग्री कोस्टेल बाटविया (बटविया कैसल) को खंडहरहरुमा लिया गया। 20 औं शताब्दीको सुरुमा त्यहाँ एक महिला हस्टल थियो। एकै समयमा, विद्यार्थीहरूको प्रशिक्षणको लागि अतिरिक्त भवनहरू बनाइयो।
समयको समयमा, युनियन युनियन र इन्टरटेनरी ब्रिगेडको मुख्यालय यहाँ अवस्थित थियो। शिक्षा विभाग र संस्कृति केवल भवनमा 1982 मा पुन: प्राप्त गर्न सक्षम भयो। उहाँले तुरुन्तै प्रदर्शनका लागि प्रयोग गर्न थाल्नुभयो।
जकार्तामा कलाको राष्ट्रिय ग्यालरीको विवरण
संरचना एक सुन्दर इमारतमा ठूलो स्तम्भहरू र बर्गहरू, ग्रीक शैलीमा बनाइएको छ। हाल, संस्थाको सङ्ग्रहको समकालीन कलाको 1,770 प्रदर्शनहरू छन्। यहाँ त्यहाँ स्थायी जोखिम र अस्थायी व्यक्तिहरू छन्। एक अलग कोठा मा विभिन्न शताब्दियों देखि प्रदर्शित हो, जो रूप मा पेश गरिएको छ:
स्थानीय जनजातिहरूको दैनिक जीवनका वस्तुहरू;
सुरुचिपूर्ण चीनी मिट्टी को बरतन उत्पादनहरु;
उपहारहरू, जुन संसारका विभिन्न देशहरूद्वारा ग्यालेरीमा प्रस्तुत गरियो।
साथै भवनमा संसारका वरिपरि आधुनिक युवा कलाकारहरू र मूर्तिकलाहरूद्वारा कला प्रतिष्ठानहरू छन्। सबैभन्दा उल्लेखनीय कार्यहरू यस्तो इन्डोनेसियन र विदेशी लेखकहरूले निम्न रूपमा प्रदर्शन गरे:
Raden Saleh, आदि।
युवाहरूको लागि अवसर
यो संस्थाले प्रतिभाशाली कलाकारहरूको लागि विश्व स्तरको बाटो बनाउन एक अनोखी मौका दिन्छ। प्रशासकले भित्री व्यक्तिलाई खोज्न र शिक्षित गर्न विशेष कार्यक्रम बनाएका छन्।
सारा संसारका युवा लेखकहरू यहाँ आश्रय पाउन सक्छन् र विश्व दृश्यको लागि आफ्नो काम प्रदान गर्न सक्छन्। उनीहरूका कामहरू संरक्षित हुनेछन्, प्रदर्शन र लगातार प्रचारित, यहाँ प्राप्त गर्न धेरै सपनाहरू। उदाहरणका लागि, 2003 मा नेशनल ग्यालरी अफ आर्ट्सले रूसी लेखकहरूको कामबाट प्रस्तुत गरेको प्रदर्शनीको आयोजना गर्यो।
जकार्तामा राष्ट्रिय आर्ट गैलरी स्थानीय बासिन्दाहरूले मजा लिन्छन्। यहाँ तपाईं इन्डोनेसियन कला इतिहासकारहरू र इतिहासकारहरू भेट्न सक्नुहुन्छ। उनीहरू यहाँ व्यापारमा आउँछन्, किनभने विस्तार उपयोगी जानकारीको भण्डार हो।
ग्यालरी प्रशासनले उत्तम तरिकामा संग्रह प्रस्तुत गरी उत्कृष्ट सुविधा प्रदान गर्यो। त्यसोभए, जब एक कोठाबाट अर्कोतिर जान्छ, आगन्तुकहरूले केवल गुरुहरूसँग परिचित हुन सक्नेछन्, तर इन्डोनेशियाको संस्कृतिको विकासको इतिहास पनि अध्ययन गर्न सक्नेछन्।
राष्ट्रिय ग्यालरी मङ्गलबारदेखि आइतबार साँझ9बजेदेखि बिहान 16:00 सम्म खुला छ। संस्थाको प्रवेश नि: शुल्क छ। भ्रमणको बेला, अतिथिहरूलाई कम आवाजमा बोल्नु पर्छ ताकि प्रदर्शनी को विचार गर्न को लागी अन्य मान्छे को विचलित न हो।
आकर्षण फेजिडी स्क्वायर (फ्रिमी स्क्वायर) को राजधानी को केन्द्र मा स्थित छ। तपाईं जेएल सडकमा कार द्वारा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। Letjend Suprapto वा बसहरूमा2र2बी। रोक्न पेसर कपालपा पुटह भनिन्छ।
केशिका ब्र्रिड 2013
बुना भयो सेतो लगाएर के गर्ने?
Nebulizer वा ईश्वर - जो राम्रो छ?
जेसिका अल्बाबाट बच्चाको शवर: अतिथिहरू, उपहारहरू, तस्बिरहरू
जेनेट जैक्सन 43 किलोग्राम द्वारा बरामद गर्यो
अप्ठ्यारो-बाध्यकारी विकार - कारणहरू र नतिजाहरू, कसरी उपचार गर्ने?
कपालको लागि बादाम तेल
पूर्व-पतिहरु जनी डिपप को आश्वासन दिईएको छ कि अभिनेता को महिलाहरु लाई कभी नहीं पीटाएको छ
बिरुवा लगाउनु अघि ककुलहरूको बीउ बढाइदिनुहोस्
इङ्ग्रेजबाट जाम - राम्रो र खराब
पलाऊ दाँतमा एक cauldron मा - एक वास्तविक उजुरी को स्वादिष्ट र रोचक व्यञ्जनहरु
केला चीताक - नुस्खा
तल्लो पेटको लागि व्यायाम गर्नुहोस्
Vika रोमन कति पतली थियो?
पैरारोवेरियल पिस्ट - ट्यूमर कस्तो खतरनाक छ, यसलाई कसरी व्यवहार गर्ने र यसलाई कहिले हटाउन सकिन्छ?
महिला गृह सूट
नीलो स्वेटर - यस सिजनको सबैभन्दा फैशनेबल मोडेलहरूको 36 वटा फोटो
सूर्य द्वारा हिसाब गर्दै